गगन थापा पनि मन्त्री बन्ने - Himalayan Kangaroo
गगन थापा पनि मन्त्री बन्ने
Posted by Himalayan Kangaroo | ८ भाद्र २०७३, बुधबार ०२:०० |
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने बाँकी मन्त्रीको नाम बुधबार टुंगो लगाउँदैछ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई समेत चित्त बुझाउनेगरी मन्त्रीको नाम टुंग्याउने तयारी गर्नुभएको छ । कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरुमा सीतादेवी यादव, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, डा. प्रकासशरण महत, बालकृष्ण खाँण, जीवनबहादुर शाही, मीनबहादुर विश्वकर्मा, शङ्कर भण्डारी, गगन थापा, फरमुल्लाह मन्सुर, दीपक गिरी, नविन्द्रराज जोशीलगायतको नाम बढी चर्चामा छ ।
यसअघि गृह मन्त्रालय नपाएका कारण सरकारमा नगएका केसी शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुभएको छ । यस्तै कोइराला र महतमध्ये एक जनाले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्ने लगभग तय भएको छन् । यसअघि परराष्ट्र मधेसी मोर्चाको लागि छुट्याइएपनि उ सरकारमा जाने, नजाने अनिश्चित भएकाले अहिले कांग्रेसले नै लिने सहमति भएको बताइएको छ । तर परराष्ट्रमा को जाने भन्नेमा शेखर कोइराला र प्रकाशशरण महतबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
यस्तै कांग्रेसका तर्फबाट युवा नेता गगन थापा मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । तर थापाले पाउँने मन्त्रालयबारे भने टुङ्गो लागिसकेको छैन । कांग्रेस सभापति देउवा शुक्रबार उपचारका लागि सिङ्गापुर जाने कार्यक्रम भएकाले त्यसअघि नै कांग्रेसबाट सहभागी हुने सबै मन्त्रीलाई शपथ गराउने तय भएको छ ।
Previousलोकसेवा आयोग र नेपाली सेनाबीच द्धन्द्ध
Nextसोनाम कपुरले ऐश्वर्यलाई अन्टी भनिदिएपछि बबाल
संसद बैठक आजपनि
२९ भाद्र २०७१, आईतवार १०:२६
बुधवार अष्ट्रेलियन डलरसहित विदेशी मुद्राको मूल्य कति ?
२३ माघ २०७५, बुधबार ०१:५३
भूकम्पको भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषी पक्राउ
३१ बैशाख २०७२, बिहीबार १५:०२